Inobereka | Chikunguru 2022
Mufudzi weAustralia Corgi anosanganisa imbwa yemhuri yakanaka?
'Auggie' inogona kunge iri rimwe remadunhurirwa akacheka, asi musanganiswa weAustralia Mufudzi Corgi ndiye muridzi wayo. Verenga kumusoro kana iwe uchitsvaga akanaka asi achishanda zvakaoma imbwa!
Kana iwe uri pakutsvaga imbwa yekupedzisira yekufudza iyo inoshanda zvakanyanya uye inogona kuita chero chinhu? Tarisa kwete kumberi kupfuura yeAustralia Mufudzi wechiGerman Mufudzi musanganiswa!
Hunhu hweAustralia Hufudzi hwaHusky hunosanganisa hwemuhwisi hwejekerere hwembwa iwe?
Iyi pooch mubatanidzwa wembwa mbiri dzinoshanda - imwe mufudzi, nepo imwe iri muchina unodhonzwa. Sangana nesimba reAustralia Mufudzi Husky musanganiswa!
Aussiedor: Iri reAustralia Mufudzi Lab Lab Rikukodzera Iwe?
Kufunga nezve kutenga inoshanda imbwa prodigy? Verenga gwara redu rakazara kuAustralia Mufudzi Lab musanganiswa kuti uone kana iri imbwa yakakunakira iwe!
Mufudzi weAustralia - Chaunotarisira Iyi Imbwa Kubereka
Vafudzi veAustralia rudzi rwakasiyana-siyana. Havasi ivo imbwa dzinoshanda chete, asi ivowo vane hungwaru hwakanyanya uye vanoshamisa vemhuri shamwari.
Australia Terrier: Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve Iyi Imbwa Inobereka
Iyo diki yeAustralia terrier ine shumba ine moyo, ineshungu, uye yakangwara muvhimi mudiki akatanga kuberekwa kuvhima makonzo nenyoka.
Basenji Imbwa Inobereka Ruzivo
Basenji muvhimi asi hachisi chinhu chekare kuona kana hwema hound. Basenji, hound yepakati peAfrica, ndeimwe yemhando dzedangwe kwazvo dzichiripo. Imbwa dzerudzi rweBasenji dzinowanikwa mune hunyanzvi hwekare hweEjipitori. Nhoroondo yemazuva ano yedzinza rekuteedzera kusvika kutanga kwezana ramakumi maviri emakore ... Read more
Yakaderera-kiyi rudo: wakambonzwa nezve yakavimbika Basset Hound?
Wati wamboda here inoshanda kana imbwa yemunda ine yakaderera chiitiko chikamu? Nemaziso avo akadonha uye nzeve refu, Basset Hound inofanira kunge iri pane yako runyorwa!
36 Basset Hound Misanganiswa Kuti Udanane neZvezvino
Basset Hound yakasarudzika inonakidza, asi iyo purebred vhezheni inogona kunge isiri izvo chaizvo zvauri kutsvaga. Mhinduro - runyorwa rweBasset Hound inosanganiswa.
Chii chinonzi Beabull imbwa, uye iwe unofanirwa kuitora here?
Iwe unoda imbwa dzekugadzira? Unoda furry pal yakanaka, inotamba, uye yakanaka kwazvo mhuka yemhuri? Wobva watarisa kwete kupfuura Beagle Boxer musanganiswa AKA Beabull.
Iye ane simba Beagle ndiye akanakisa kutiza muimbi?
Tsvaga zvese zvaunoda kuti uzive nezve inonakidza Beagle, kubva pane zvakanakisa kutarisira uyu anotamba mwana kune zvaunogona kutarisira maererano nezvinetso zvehutano.
Kutsvaga shamwari yekuvhima? Iyo Beagle Basset Hound musanganiswa (AKA Bagle Hound) inogona kunge iri yekupedzisira hwema hound! Tsvaga zvimwe pamusoro peichi chakayambuka pano.
Zvese nezve Beagle Lab Sanganisa
Musanganiswa weBeagle Lab akangwara kuyambuka uyo anogara achida kuongorora zvakapoteredza. Tsvaga kana imbwa iyi inotamba ichienderana nemhuri yako.
Iyo Beaglier imbwa - yakanakisa Beagle muchinjikwa pasi?
Iyo Beaglier ine simba uye rakavimbika rakayambuka pakati peBeagle neCavalier King Charles Spaniel. Wakagadzirira kutsvaga zvimwe pamusoro peiyi dhizaina pooch?
Iyo Bearded Collie - Chaunotarisira Iyi Imbwa Kubereka
Bearded Collie, nerudo anonzi Beardie, akagadzirwa muScotland sembwa inofudza. Madzibaba avo angangodaro aisanganisira imbwa dzinofudza kubva kuEuropean nyika, senge Poland Lowland Sheepdog (Polski Owzcarek Nizinny) uye Komondor, yakasanganiswa nembwa dzinofudza hwai dzeBritish Isles. Yakagadziriswa semushandi akazvimiririra, anokwanisa ... Read more
Belgian Malinois ChiGerman Mufudzi anosanganisa iyo imbwa iwe?
Chii chawaizowana kana iwe ukasanganisa maviri epasi-kirasi anoshanda uye neese-akatenderedza imbwa? Sangana nembwa yekugadzira, Belgian Malinois ChiGerman Mufudzi. Verenga Pano!
Izvo Zvaunofanirwa Kuziva Nezve Iyo Bernedoodle
Poofy uye goofy, iyo Bernese Mountain Imbwa Poodle Sanganisa kana Bernedoodle ihybribidi iri zvakare yakapfava uye yakangwara. Ziva zvakawanda nezvavo pano!
Iyo Bernese Mountain Imbwa - Chii Chaunotarisira Kune Iyi Imbwa Inobereka
Zita rekuti Bernese Mountain Dog is a rough translation of the German 'Berner Sennenhund,' which literally means Bernese Alpine Herdsman's Dog. Rudzi rwekutanga zita iri rwainzi Durrbachler, mushure meimba yekutandarira uko idzi imbwa dzekurima dzakatengwa nekutengeswa. Rudzi rwemazuva ano rwakagadzirwa kubva imbwa dzinowanikwa mumaruwa akatenderedza Bern, Switzerland uye inongori ... Verenga zvakawanda
Une dambudziko rekusarudza chikafu uye marangi ekupa yako Goldie? Ichi chinyorwa chichava chako chekupedzisira gwara rekuziva yakanakisa imbwa chikafu cheGolden Retrievers.
Ndeipi yakanyanya kunaka imbwa chikafu cheLabhs?
Pazasi iwe unowana edu epamusoro anotora epamusoro-mhando imbwa zvekudya izvo zvinyoro padumbu rako rembwa iro rinosangana nembwa iri kukura yezvinodiwa zvinovaka muviri.
Imbwa Inobereka 101: Chii chinonzi Czechoslovakian Wolfdog?
Zvese A Peti Mubereki Anofanirwa Kuziva Asati Atenga Iyo Nhema Pug
American Alsatian: Yekupedzisira Nhungamiro kune Mhumhi-yakafanana Imbwa
Chiono Chekutarisa kune Imbwa Anatomy (Musuru, Organ & Skeletal Dhizaini)
Maitiro Ekusarudza Puppy yekutsvaga uye Kununura
Imbwa Inobereka Info: Ko Vafudzi veGoridhe imbwa dzakanaka here?
Chirungu Cocker Spaniel ishamwari yakanaka here?
chii chinonzi pomchi dog
corgi uye husky musanganiswa rudzi
husky uye pomeranian mix puppies
Boston uye French bulldog musanganiswa
mhuri yekare tsvuku mhino pitbull maitiro